Karazana fandriana hopitaly | JBH Medical
Ny fandriana hopitaly amin'ny ankapobeny dia manondro ny fandriana fitaizana be antitra, izay noforonina arakaraky ny filan'ny marary sy ny fahazaran-piainana mipetraka am-pandriana, ary natao ho an'ny mpianakavy miaraka aminy. Izy io dia manana asan'ny mpitsabo mpanampy maro sy bokotra fandidiana. Izy io dia mampiasa fandriana voarindra sy azo antoka, toy ny fanaraha-maso ny lanjany, ny fihinanana eo an-damosina, ary ny famadibadihan-tsaina, ny fisorohana ny fandriana, ny fifandraisana amin'ny tsindry ratsy, ny fanaraha-maso ny fanairana amin'ny alàlan'ny fandriana, ny fitaterana finday, ny fitsaharana, ny fanarenana (ny fihetsiketsehana, ny fijoroana), ny fanafody fampidirana sy asa hafa. Ny fandriana fanarenana dia azo ampiasaina irery na miaraka amin'ny fitsaboana na fitaovana fanarenana. Ny fandriana mpitsabo mpanampy amin'ny ankapobeny dia tsy mihoatra ny 90cm ny sakany ary fandriana tokana misy sosona tokana. Mety amin'ny fandinihana ara-pitsaboana, ny fizahana ary ny fiasan'ny mpianakavy. Azo ampiasaina koa ho an'ny olona salama, manana fahasembanana mafy, antitra, tsy fananganana urinary, marary maratra amin'ny atidoha amin'ny fitsaboana maharitra na konkestraina ao an-trano, indrindra amin'ny fampiharana. Ny fitaovana mahazatra an'ny fandriana herinaratra dia misy ny lohan'ny farafara, ny farafara fandefasana asa maro, ny tongotra eo am-pandriana, ny tongotra, ny kidoro fandriana, ny mpanara-maso, ny tsorakazo elektrika, ny mpiambina aforitra 2 havia sy havanana, ary ireo mpangalatra mangina 4 voaroaka. Latabatra fisakafoana mifangaro, fitoeram-paompy rivotra anti-decubitus 1, talantalana ambanin'ny farafara, fanairana fanaraha-maso mifamatotra fanindriana 2 fanerena, setran'ny sensor 1 fanaraha-maso lanja, latabatra mihetsiketsika mivantana ary singa hafa. Misy fandriana tsotra, fandriana famerenana amin'ny laoniny, ary fandriana famolavolana manan-tsaina. Ny fandriana amin'ny hopitaly dia azo antsoina hoe fandriana hopitaly, fandriana ara-pahasalamana, fandriana mpitsabo mpanampy, sns. Fandriana ampiasain'ny marary mandritra ny fitsaboana, ny famerenana amin'ny laoniny ary ny fahasitranana. Ampiasaina amin'ny hopitaly lehibe, tobim-pahasalamana ao an-tanàna, tobim-pahasalamana ho an'ny fiarahamonina, andrim-panarenana ary fikarakarana an-trano izy ireo. Ward sns.
Raha ny filazan'ilay fitaovana dia azo zaraina amin'ny farafara ABS izy, ny fandriana vy tsy misy fangarony, ny fandriana vy tsy misy vy, ny fandriana famafazana vy, sns.
Raha ny tanjon'ilay izy dia azo zaraina ho fandriam-pahasalamana sy fandriana tokantrano.
Raha ny fiasa dia afaka mizara ho fandriana hopitaly elektrika sy fandriana hopitaly manual izy io. Ny fandriana hopitaly elektrika dia azo zaraina ho fandriana hopitaly elektrika miasa dimy sy fandriana hopitaly miasa telo. Ny fandriana hopitaly manual dia azo zaraina ho fandriana hopitaly avo roa heny, fandriana hopitaly tokana ary fandriana hopitaly fisaka.
Fandriana hopitaly elektronika marobe
Ny fandriana dia noforonina tamin'ny alàlan'ny fanamafisam-peo vita amin'ny aliminioma, rafitra ambonin'ilay fandriana ny tranony, ary mifoka rivotra ny velaran'ny fandriana. Ny tontolon'ny fandriana manontolo dia voatsabo amin'ny famafazana elektrika.
Ny fiambenana dia vita amin'ny mombamomba ny alim-baravarankely ary azo aforitra.
Ireo kodiarana efatra dia mandray 125mm mpitsabo mihaja sy mitazona ny tenany, izay azo antoka sy azo antoka.
Ny latabatra fisakafoana dia latabatra fisakafoana plastika azo refesina 30cm, izay matanjaka sy mateza.
Zoro aforon'ny lamosina: 0-75 °, zoro aforitra amin'ny tongotra: 0-90 °
Refy: 2000 × 900 × 500mm (halavany × sakany × haavon'ny fandriana)
Haben'ny kabine: 225 × 190mm
Fandriana hopitaly maro an'isa
Raisina ho ohatra, ny fandriana ABS, ny fandriana boky misy fampiasa maro-maro dia mizara ho fandriana avo roa heny, fandriana tsy mandeha irery ary fandriana fisaka.
Ny fiasan'ny vokatra amin'ny fandriana hopitaly manual dia mitovy amin'ny an'ny fandriana hopitaly elektrika, saingy ny marary dia tsy afaka mampiasa azy manokana ary mitaky ny fanampian'ny olona miaraka aminy. Satria ambany noho ny fandriana hopitaly herinaratra ny vidiny, dia mety indrindra ho an'ireo marary atory am-pandriana mandritra ny fotoana fohy izany. Mandritra izany fotoana izany dia mampihena ny enta-mavesatra sy ny tsindry ataon'ny mpiasa miaraka aminy.
Fandriana vy tsy manam-paharoa amin'ny fandriana hopitaly rocker
Ny lohan'ny fandriana vy tsy misy fangarony, bika fandriaka vita amin'ny vy ary fandriana ambony dia mety amin'ny firafiny sy maharitra. Izy io dia afaka mahatsapa ny fiasa roa amin'ny lamosina sy ny famolahana tongotra. Izy io dia mety ho an'ireo marary efa antitra izay tsy afaka miala eo am-pandriana na manelingelina azy hiala amin'ny fandriana. Manome azy ireo tolotra fikarakarana manokana ilaina amin'ny famerenana amin'ny laoniny, fitsaboana, fitsangatsanganana ary fiainana andavanandro, manatsara ny haavon'ny fitsaboana, ary manatsara ny kalitaon'ny marary, indrindra ny Fianakaviana, andrim-pitsaboana eny amin'ny fiarahamonina, trano fitaizana be antitra, hopitaly geriatrika
farafara fandriana ho an'ny marary, fandriana fikarakarana maranitra, fanary ara-pitsaboana, fandriana hopitaly herinaratra, sarontava vava, fandriana hopitaly mandeha ho azy,
farafara fandriana ho an'ny marary, fandriana fikarakarana maranitra, fandriana hopitaly mandeha ho azy, sarontava vava, fandriana hopitaly herinaratra, fanary ara-pitsaboana,